Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Kani waa kan: Alitalia waxay ka duushay duulimaadkeedii ugu dambeeyay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Kani waa kan: Alitalia waxay ka duushay duulimaadkeedii ugu dambeeyay.
Ciao, bella! Markabkii siday calanka Talyaaniga 75 -kii sano ee uu shaqeynayay ayaa maanta soo afjaraya.
Alitalia, oo 75 jir ah, ayaa ahaa diyaaradda saddexaad ee ugu weyn Yurub dabayaaqadii 1960kii, iyada oo ka dambaysay British Airways iyo Air France.
Diyaaradda, oo tobannaan sano xiriir la lahayd kobaca dhaqaale ee Talyaaniga kadib, waxay luminaysay lacag tan iyo 2008dii.
Alitalia waxaa lagu beddeli doonaa diyaarad cusub oo dawladeed, ITA, oo shaqadeeda bilaabanaysa Jimcaha.
Markabka calanka qaranka ee Talyaaniga, Alitalia-waa diyaaradda saddexaad ee ugu weyn Yurub dabayaaqadii 1960-yadii, oo ka dambaysay British Airways iyo Air France, kuwaas oo tobanaan sano xiriir la lahaa koboca dhaqaale ee Talyaaniga kadib, ayaa ugu dambayntii soo afjaraysa safarkii 75-sano qaatay.
Alitalia, ayaa loo qorsheeyay inay fuliso duulimaadkeedii ugu dambeeyay maanta oo ay taariikhdu tahay 14 -ka Oktoobar, iyadoo adeeggeedu yahay Cagliari kuna sii jeedo Rome.
Maanta ka dib, Alitalia waxaa lagu beddeli doonaa diyaarad cusub oo dawladeed, ITA, oo shaqadeeda bilaabanaysa Jimcaha.
Duulimaadkii ugu dambeeyay ee Alitalia oo ka yimid Sardinia ayaa la filayaa inay ku soo degto garoonka Rome-Fiumicino 11:10 pm (21:10 GMT), afhayeen u hadlay shirkadda ayaa yiri.
Markay ahayd diyaarad caalami ah oo awood leh, taasi oo qaadaysay 25 milyan oo rakaab ah sannad walba 1990 -yadii laga soo bilaabo rom -kii 10,000 ee 1947, Alitalia waxay ahayd diyaaraddii ugu horraysay adduunka ee sidda baadariga, iyada oo diyaarad papal ah oo loo yaqaan Shepherd One. Alitalia waxay qaadatay afar baadari 171 dal oo ku kala yaal qaaradaha oo dhan.
Laakiin horraantii 2000naadkii wax baa is beddelay.
Alitalia waxay luminaysay lacag tan iyo 2008. Sannadkii 2017 -kii ayay musalaftay waxaana gacanta loo geliyay maamuleyaal gaar ah. Xayiraadaha safarka hawada ee la xiriira COVID-19 ayaa ku daray dhibaatooyinka Alitalia.
Shirkaddu waxay joojisay iibinta tigidhada Ogosto 25, 2021.
Bishii Sebtembar, Komishanka Yurub ayaa oggolaansho siiyay ITA (Italia Trasporto Aereo) waxayna xukuntay in shirkadda cusub aan lagu eedayn doonin € 900 milyan (1 bilyan oo doolar) gargaar dawladeed oo sharci -darro ah oo uu helay kii ka horreeyay sannadkii 2017 -kii.
In kasta oo ay jireen warbixino sheegaya in magaca Alitalia laga yaabo inuusan weli dhiman oo heshiis laga yaabo inuu soo baxo, xaraashka bilowga ah ee lagu iibiyo astaanta ayaa soo jiidasho lahayn oo ITA waxay sheegtay in qiimaha bilowgu aad u sarreeyo.